त्यसैले त मेरो गाउँप्रति गर्व छ ! « Sansar News
४ आश्विन २०७८, सोमबार १४:१५
उ त्यो डाँडापारि कोइलीले कुहुकुहु गाउछ । जहाँ मनमोहक हरियाली विक्षिप्त मनलाई पनि आकर्षण गर्ने प्राकृतिक सुन्दरता लुकेको छ त्यहि वरिपरि छेउमा दौँसो बिझाउने घाँस र रुख विरुवाको लहराहरुसँगै मेरो बालापनको निर्दोश क्रियाकलापहरुको ताजा यादले मलाई हरहमेसा गाउँतिरै तान्छ । बाल्यकालका सम्झनाहरु झल्यास्स बनाइदिन्छ । सुरिलो डाँडाको हरियो जङ्गलको फेदीमा जमिन–जमिन खोतल्दै रुखको जरा–जरा छिचोल्दै भित्री तहबाट निस्किएको मुलको पानीसँग शहरको कुनचाहिँ महँगो कृतिम वस्तु दाज्न मिल्छ भन्नुस त ? कसले भन्ने हिम्मत गर्छ मलाई तिमी नयाँ जमाना अनि शहरिया भनेर ? म त त्यहि चोखो माटोमा उम्रिएको मुलको पानी खाएर हुर्केकी छोरी हुँ, र त मलाई मेरो गाउँ अत्यन्तै प्यारो लाग्छ ।
शहरियाहरु मेरो गाउँलाई विकट भन्छन्, उनीहरुलाई के थाहा त्यहाँको अर्गानिक माया ममताको सुविधा, अर्गानिक सम्बन्ध अनि अर्गानिक खानाको महत्व ? सुसाउँदै बहने खोलाको पानीको शितलता अनि आटो, ढिडोसँगको छुट्टै सम्बन्ध । यि सब प्राप्तिको लागि मेरो आमाको चोली भिजेको छ त्यहाँ, मेरो बाबाको धेरै आस्कोटहरु फाटेका छन् त्यहाँ । त्यसैले त मलाई मेरो गाउँ अत्यन्तै प्यारो लाग्छ ।
विषादियुक्त विचार, स्वार्थयुक्त व्यवहार, संस्कारहिन आचरण भएका शहरियाहरु गाउँलाई हेला गर्दै भन्छन्, ‘स्वास्थको लागि राम्रो हस्पिटल छैन, शिक्षाको लागि राम्रो स्कुल छैन । तर त्यहि गाउँ जहाँ लाखौँ खर्च गर्दा पनि नपाइएको अक्सिजन फ्रीमा पाइन्छ । हस्पिटलमा गोलीको रुप र आकार दिइएका क्याल्सियम प्रोटिन र सबै प्रकारका भिटामिनहरु बिना प्रशोधित हरेक दिनको खानामा पाइन्छ साथै मौलिकता, अनुशासन, संस्कार जस्ता अमूल्य शिक्षा फि नतिरिकनै आर्जन गर्न पाइन्छ । जुन जीवनको लागि अति नै आवश्यक र उपयोगी छ ।
गाउँमा मनाइने हरेक चाडपर्वको विशेषता र महत्वको मजै बेग्लै छ शहरको जस्तो कहाँ हो र, देखावटीपन, सानो ठूलोको प्रत्यक्ष विभेद, तडक–भडक क्रियाकलापको सामाजिक संजालमा प्रदर्शन, नकरात्मक प्रतिस्पर्धा र विकृति । तर, गाउँको परिवेश बिल्कुल फरक छ । वातावरणको रौनकले नै चाडपर्वको आभास दिलाउछ नत त्यहाँ धनी गरिबको भिन्नता छुट्टिन्छ नत विकृतिको रोग नै । सेतो कमेरो र रातो माटोको प्राकृतिक सजावट गोबरले लिपेको आगनमा पातको टपरिमा उम्रेको जमारामा दशैको सुगन्ध भेटिन्थ्यो रत वास्तविक दशैको आभास हुन्थ्यो । जुन आभासमा मलाई मेरो बाल्यकालले गिज्याइरहन्छ हरेक चाड्पर्वमा ति पाखाहरुले मेरो प्रतीक्षा गरिरहन्छन् र त मलाई मेरो गाउ अत्यन्तै प्यारो लाग्छ नि !
तर त्यहि गाउँ जहाँ लाखौँ खर्च गर्दा पनि नपाइएको अक्सिजन फ्रीमा पाइन्छ । हस्पिटलमा गोलीको रूप र आकार दिइएका क्याल्सियम प्रोटिन र सबै प्रकारका भिटामिनहरु बिना प्रशोधित हरेक दिनको खानामा पाइन्छ साथै मौलिकता, अनुशासन, संस्कार जस्ता अमूल्य शिक्षा फि नतिरिकनै आर्जन गर्न पाइन्छ । जुन जीवनको लागि अति नै आवश्यक र उपयोगी हुन्छ ।
एकआपसमा भाइचाराको सम्बन्ध, मर्दापर्दाको एकता, व्यक्ति-व्यक्तिबीच सद्भाव सम्मान आदिको दरिलो सस्कार पुस्तौदेखि नै अनवरत चलिरहेको मेरो गाउँप्रति गर्व लाग्छ । त्यो समाजको समाजकत्व देख्दा लाग्छ, बाँच्ने रहरहरुले लामो आयु माग्छन् । खुशीहरुको अकाल मृत्यु हुँदैन । दुःखले हातमा हात पाउँछ अनि दुःख सुखमा परिणत हुन गार्हो मान्दैन यहि त हो गाउँको मुख्य विशेषता ।
बचपनमा सँगै भाडाकुटी र गुच्चा खेल्ने ति निर्दोष र निस्वार्थी साथिहरु एकपछि अर्को गर्दै जीवनबाट छुट्दै गएपनि भित्रि मनको कुनामा लुक्दारहेछन् याद बनेर, त्यसैले त सम्झेर बेला–बेलामा एक्लै मुस्कुराउने बाहाना भेटाएकी छु रत मलाई मेरो गाउँ अत्यन्तै प्यारो लाग्छ ।
गोन्जालो रिहाइ ऐक्यबद्धतामा हामी पनि सहभागी बनौं